KALE FANS amin'ny Cross Fit
Foibe ara-panatanjahan-tenan'ny mpanjifanay ity, olona mahay mandanjalanja maro no hitanay eto. Mafana be ny toerana ary sarotra ny mifantoka amin'ny fahasalamana ho an'ny lehilahy. Ity mpanjifa ity dia nahita fomba maro hanalana rivotra sy hampangatsiaka ny gym saingy tsy misy vokany tsara. Tsara vintana izy nahita ny mpankafy KALE, nametraka KALE FANS ho azy izahay, mihamaro ny olona tonga eto ary rehefa mahazo aina ny toerana dia vonoiny ny KALE FANS ary fomba mitsitsy angovo ihany koa.
Ity mpanjifa ity dia mizara ny orinasany aminay foana ary hanokatra toeram-panatanjahan-tena vitsivitsy izy ary nanapa-kevitra ny hividy ny KALE FANS anay, fanapahan-kevitra feno fahendrena. Tena manantena izahay fa ho tsara kokoa sy ho tsara kokoa ny zava-bitany ary hiara-miasa bebe kokoa izahay, nanoro hevitra azy koa izahay mba ho lasa masoivoho ary tsy mino izahay fa handà izany fahafahana tsara izany.
KALE FANS, Sinoa lehibe indrindra HVLS valin-drihana mpankafy mpamatsy ary mifantoka amin'ny ara-barotra sy indostrialy mpankafy valin-drihana, raha liana amin'ny KALE FANS anao dia aza misalasala mifandray aminay malalaka.